ကံနာလား ဝဋ်နာလား အချစ်က ခါးတယ် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ရေးသားသူ – မောင်ခြိမ့်
“သား … ထတော့လေ … မွေးနေ့ ဘုရားသွားမှာဆို”
“ဟုတ် … မာမီ … သားနိုးနေပါပြီ”
မာမီ အသံကြောင့် ကျနော် ပျင်းကြော တစ်ချက်ဆန့်ပြီး အိပ်ယာထလိုက်တယ်။ ပြတင်းပေါက် ဖွင့်ကြည့်တော့ အလင်းရောင် စူးစူးနဲ့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ အော်မြည်သံလေးတွေ ဆူညံနေတာ။
ကျနော့် နာမည် ဟိန်းမင်းလတ် အသားဖြူဖြူ မျက်ခုံးထူထူနဲ့ ရုပ်က သာမန် ကြည့်ကောင်းရုံပါ။ ထူးခြားချက်က ကျန်းမာရေး လိုက်စားလို့ ဘော်ဒီက ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့မို့ ကျောင်းကတည်းက မျက်နှာတော့ ပွင့်တာပေါ့။
ဒယ်ဒီ နာမည်က ဦးဇော်ဟိန်း ။ ဒယ်ဒီက မရှိတော့ပါဘူး ဆုံးတာ ၅ နှစ်ကျော်သွားပြီ။ မာမီနာမည်က ဒေါ်နန်းသဇင် ။ အခုထိ ကျနော်နဲ့ အတူနေတုန်းပေါ့။
ကျနော်က ဟိုးအရင် ဘယ်မိန်းမမှ မကြိုက်ခဲ့ဘူး အပေါင်းသင်း မက်တာလည်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘောလုံးကန် ရေကူး ရုပ်ရှင်ကြည့် ဒီလောက်ပဲ။ အရပ်က ၅ ပေ ၉ လက်မမို့ သူငယ်ချင်းတွေထဲ အရပ်အမောင်း အကောင်ဆုံးပဲ။
ကျောင်းပြီးတော့လည်း ဒယ်ဒီ မဆုံးခင် ဒယ်ဒီ့ကုမ္ပဏီ ဝင်လုပ်ခိုင်းပေမယ့် ကျနော် ဝါသနာပါတဲ့ ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်းပဲ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ စုလုပ်ကြတာ။ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း လုပ်တော့မှ ကျနော့်ဘဝမှာ ပထမဆုံး အချစ်ဆိုတာ သိလာခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ ကျနော့်မွေးနေ့မို့ မမသွင်နဲ့ ဘုရား အတူသွားဖို့ ပြောထားပြီးသား။ မမသွင်ဆိုတာ နာမည် အရင်းက ယမုံသွင် တစ်ဦးတည်းသောသမီး ကျနော့်ထက် အသက် ၃ နှစ်ကြီးတဲ့ ရှေ့နေမလေး တစ်ယောက်ပါ။ ကျနော်က ၂၇ နှစ် ဒီနေ့ပြည့်တာ။
မမသွင်က အသက် ၃၀၊ အရပ် မနိမ့်မမြင်နဲ့ မျက်နှာက အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် နုပျိုနေဆဲပဲ။ ကျနော့် ချစ်သူမို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ မျက်ဝန်း နက်ကြီးတွေနဲ့ ဆံနွယ်တွေ အမြဲတမ်း စုချည်ပြီး ကျောဘက် ပို့ထားတတ်တဲ့ မမသွင်ရဲ့ တင်းမောက် နေတဲ့ နို့အုံတွေနဲ့ ခါးသေးကျဉ်လေးအောက် ကော့ ထွက်နေတဲ့ ဖင်သားစိုင်ကြီးတွေက မြင်သူလည်ပြန် ငေးယူရတယ်။
ရှေ့နေဆိုတော့ စကားပြော ပါးနပ်ပြီး အပေါင်းသင်း ဆန့်တော့ လူချင်လူခင်လည်း များတယ်။ ကျနော် မမသွင် အချစ်ကိုရဖို့ အတော်ကြိုးစားလိုက်ရတာပါ။ ရေချိုး အဝတ်စားလဲပြီးတာနဲ့ မမသွင်ဆီ ဘုရားသွားဖို့ ဖုန်းလှမ်း ဆက်လိုက်တာပေါ့။
မမသွင်း ဖုန်းထဲက ယောကျ်ားတစ်ယောက် အသံမို့ ကျနော် စိတ်ပျက်မိတယ်။ ခုလို မနက်ခင်း ဖုန်းက ချစ်သူ အိပ်ခန်းထဲ ရှိနေတဲ့အချိန် သူစိမ်းယောက်ျား လက်ထဲ ဘယ်လို ရောက်နေတာလဲ။
“ဒါ … မမသွင် ဖုန်းမဟုတ်လား”
ကျနော့် အသံကြောင့် တဖက်က ခဏတော့ အသံ တိတ်သွားတယ်။ မမသွင်ရဲ့ ဒီဖုန်းနံပတ်က vip လေ။ သူ့ အထက် လူကြီး ၃ ယောက်လောက်နဲ့ ကျနော်ပဲ သိတာ။ သူ့ဆရာများလား ကျနော် တွေးနေမိတယ်။
” အော် … ကိုဟိန်းမင်းလတ် … ထင်တယ် … ခဏကိုင်ထားနော် “
ကျနော် ဘယ်သူဆိုတာ ဖုန်းကိုင်တဲ့သူ သိနေပုံပါ။
” ကိုဟိန်းမင်းလတ် … သူ မအားသေးဘူးတဲ့ဗျ … မိတ်ကပ်လိမ်းနေလို့ … ခဏနေမှ ပြန်ဆက်ပါတဲ့ “
” ဟုတ် … ဟုတ် “
ပြောပြီးတာနဲ့ ကျနော်လည်း ဖုန်းပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။
” ဟူး “
” သူ မအားသေးဘူးတဲ့ဗျ မိတ်ကပ်လိမ်းနေလို့ “
ဘုရားသွားခါနီး ကျနော့်နားထဲ ဒီစကားသံပဲ ခဏခဏကြားနေမိတာ ကျနော် နာကျင်မိတယ်ဗျာ။ ချစ်သူရဲ့ အခန်းထဲ မိတ်ကပ်လိမ်းနေချိန် သူစိမ်းယောကျ်ားတစ်ယောက် ရှိနေတဲ့ ပက်သက်မှုက ဘယ်အခြေနေလည်း ဘာတွေလည်း ဟူးးးး စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးလာတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ ပြောတဲ့စကား နားထဲ ကြားယောင်လာတာဗျ။ ကိုယ်က ဂီယာပဲထိုးထားရင် သူများကတက်မောင်း သွားမယ်တဲ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မမသွင်ကို ချစ်လွန်းလို့ လက်မထပ်သေးပဲ အဆုံးစွန်ထိ မသွားဖို့ ကျနော် အမြဲတမ်း ထိန်းထားခဲ့တယ်။ နှစ်ယောက်သား လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ရင် နို့လေးတွေ စို့တယ် အဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်ပေးတယ်။ မမသွင်ကလည်း ကျနော့် လီးကို ဆုပ်ကိုင် ဂွင်းထုပေးပါတယ်။ ဒီလောက်ပဲ ရှေ့ဆက် မတက်ဘူး။
” ဟယ် … သားလေး … ဘုရားသွားမလို့လား … ချစ်သူနဲ့ ချိန်းမလို့လား မသဲကွဲဘူး … အပြတ် သားနားနေတာ ခ်ခ် ခ်ခ် “
အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းလေးထဲ ကျနော် တွေးနေတုန်း မာမီ အသံကြောင့် အတွေးစ ပျက်သွားခဲ့တယ်။ စိတ်ရှုပ် ထွေးနေပေမယ့် ကျနော် မာမီကို အားတင်း ပြုံးပြ လိုက်တယ်။
” ညနေကြ … သားအတွက် … မာမီ့ လက်ဆောင် … အံဩသွားမယ်နော် “
” အင်းပါ … မာမီ “
ကျနော် မာမီ့ကို ပြန်ပြောတဲ့ချိန် ကျနော့် စကားတွေ ခြောက်ကပ်နေမှန်း အလိုလို သိနေပါတယ်။
” တူတူ တူတူ တူ …… “
မာမီ အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်သွားတော့ ကျနော့်ဖုန်းက ဖုန်းသံလေး မြည်လာတယ်။
” ဟဲလို မောင်လား … ခုန အလှပြင်နေလို့ … ကိုဖြိုး ရောက်နေတာနဲ့ ပြောခိုင်းလိုက်တာ … ပြောလေ … မောင် “
မာမီက မမသွင် ဖုန်းမှန်း သိတာနဲ့ ပြုံးစိစိလေး လုပ်ပြီး မျက်စိတစ်ဖက် မှိတ်ပြရင်း အိမ်ပေါ်တက်သွား တာပေါ့။ မမသွင်နဲ့ ကိုဖြိုးမောင် တို့က ခြံချင်းကပ် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေမို့ ရင်းနှီးနေမှန်း ကျနော်သိတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုဖြိုး ဆက်ဆံပုံတွေက ပိုင်စိုး ပိုင်နင်းမို့ ကျနော် မကြိုက်ခဲ့တာ။ မမသွင် မျက်နှာနဲ့ မေးထူး ခေါ်ပြော ဆက်ဆံပေမယ့် တခါတခါ ကျနော်ရှေ့မှာ တောင် မမသွင် လက်မောင်းတို့ ခါးတို့ကို ပုတ်ပြီး စကားပြောနေတာဗျ။ မမသွင်ကလည်း ကျနော်ရှိတာတောင် မျက်နှာ တစ်ချက် မပျက်ဘူး။ ကိုဖြိုး လက်မောင်းကို ဆွဲဆိတ်ရင်း ရယ်ရယ်မောမော စကားပြန်ပြောတတ်တယ်။
” ဟောတော် … မောင် … ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး … စိတ်ကောက်ပြန်ပြီပေါ့ … ဟွန့် “
” မဟုတ်ပါဘူး … ဒီနေ့ ဘာနေ့လည်း … မမသွင် သိလား “
” ဒီနေ့ ကြာသာပတေးနေ့လေ … မောင်ရဲ့ … ဘာလို့ပါလိမ့် … ထူးထူး ဆန်းဆန်း “
” ဟာ … မမသွင်ရယ် … မောင့် မွေးနေ့လေ “
ကျနော် နာကျင်ရတယ်ဗျာ ဟိုတစ်ရက်ကမှ ပြောပြထားတာ။
” အိုးးး … ဆောရီး မောင်ရယ် … ဒုက္ခပါပဲ … ဒီနေ့ ကိုဖြိုးက … သူ့အဖေ ဆုံးတာ ၃ နှစ်မြှောက်မို့ … ဘုန်းကြီးကျောင်း … သွားဖို့ မနက်အစောကြီး ကတည်းက … လာခေါ်နေတာ “
” ဟမ် “
ကျနော့် အသံ ကျယ်သွားတယ် ထင်တယ် တပြိုင် တည်း လိုလို စိတ်ထဲ နစ်ကနဲ့ ခံစားလိုက်ရတာဗျ။ ချစ်သူက ကြိုပြောထားတာ သတိမရပဲ ငယ် သူငယ်ချင်းရဲ့ ကိစ္စကို အလေးထားနေတာဗျာ။
” ဟိုလေ … စိတ်မကောက်ပါနဲ့ … မောင်ရယ် … သွင် ဘယ်ချိန်လာရမလည်းဟင် “
” ခုကစပြီး နောက် မိနစ် ၃၀ အတွင်း … ဘုရားကြီး ရှေ့က အအေးဆိုင် လာခဲ့ “
” Ok လေ … သေချာပေါက် လာပါ့မယ် – အရမ်းချစ်တယ် … မောင်ရေ … မွမ့်မွမ့် ပြွတ်စ် “
ရှေ့နေပီပီ မမသွင်ရဲ့ ပလီပလာစကားလေးက ကျနော့် ရှုပ်နေတဲ့စိတ်ကို ခဏလေးနဲ့ ပျောက်ကွယ် သွားစေတယ်။ ဘုရားရှေ့ မွန်ထရီ အအေး ဆိုင်လေး ထဲ ကျနော်ရောက်နေတာ နာရီဝက်ရှိပြီ ခုထိ မမသွင် ရောက်မလာသေးဘူး။ ကျနော် ရင်ထဲစူးကနဲ့ နာကျင်ရတယ်ဗျာ။ မှာထားတဲ့ အအေးခွက်လေး ထိတောင်မထိမိဘူး။ ကျနော် ပြန်တော့မယ်ဗျာ။ မနေ့က တနေ့လုံး စဉ်းစားထားတဲ့ အရာအားလုံး တခဏတွင်းပဲ အားလုံး ပျောက်သွားရပြီ။ ကြိုတင် စိတ်ကူးထားခဲ့သမျှ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဘုရားက အပြန် သူငယ်ချင်း ခြံထဲ အိမ်သော့လည်း တောင်းထားပြီးပြီ မမသွင်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်မယ် တကိုယ်လုံး အဝတ်တွေ ချွတ်ခိုင်းပြီး ခြေဖဝါးကနေ ဆံဖျားထိ နမ်းမယ် ။ မမသွင်ရဲ အဖုတ်နီတာရဲလေးကို အရည်ပန်းထွက် အောင် ယက်ပေးမယ်။ ကျနော့် လီးကိုလည်း လရည် ထွက်အောင် စုပ်ခိုင်းမယ်။ အင်းးး အစီအစဉ်တွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်ကို မသိတော့တာ။
ဒီထက်ဆိုးတာက ခုထိ မမသွင် ရောက်မလာသေး တာပဲဗျာ။ နာရီကြည့်တော့ ကျနော် စောင့်နေတာ မိနစ် ၅၀ ရှိပြီ။ ဟူးးး ချစ်သူ သက်တမ်း တလျှောက် ချိန်းလိုက်တိုင်း လေးစားမှု့ မရှိတာလား ဂရုမစိုက်တာလား မသိဘူး။
သူမလာရင် ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်နေမှာကို မစာနာတဲ့ ချစ်သူအပေါ် ကျနော့် ဘက်က ဘာများ မှားယွင်းစေခဲ့တာလဲဗျာ။ မမသွင် ဘဝမှာ ကျနော်က သူ့ငယ်သူငယ်ချင်း ကိုဖြိုးမောင်လောက် အရေးမပါသလိုပဲ။ ခုလည်း ကျနော်က သူ့ချစ်သူပါဗျာ။ ကျနော့် မွေးနေ့ ဦးစားမပေးပဲ ကိုဖြိုးမောင်နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း လိုက်သွားပြီနေမှာ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဆန္ဒတွေအောက် အချိန်ပိုမှ ကျနော့် အတွက် ထင်တယ်။
အအေးခွက်ကို ကိုင်းကနေ ကိုင်ပြီး ပေါက်ခွဲပစ်မလို့ဗြုံးဆို ကျနော့် နဖူးလေးပေါ် ခပ်နွေးနွေး အသားစိုင်လေး ထိကပ်လာတာ။ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်းနဲ့ အတူ ကျနော် စွဲလမ်းရတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်နံ့လေးရောပဲ။
” သွင် … တောင်းပန်ပါတယ် … မောင်ရယ် … ကိုဖြိုးက တစ်ယောက်ထဲမို့ … ဘုန်းကြီးကျောင်း … သွင်က အဖော်အဖြစ် ဖြစ် …… “
ကျနော် စကားပြန်မပြောပဲ ခေါင်းငုံနေလို့ မမသွင် စကားလုံးတွေ ရပ်တန့်ကုန်တာ။ ကျနော် ချိန်းလိုက်တိုင်း ကိုဖြိုးဆန္ဒတွေ ဖြည့်ဆည်းရင်း အမြဲနောက်ကျ နေတတ်တာလေဗျာ။ စဉ်းစားကြည့် ကျနော့် အတွက်က မောင်ကလေ ဆိုပြီး နာမ်စားတစ်ခါပဲသုံးပြီး ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကိုဖြိုးဆိုတာ မပါရင် မပြီးတတ်တဲ့ ကျနော့် ချစ်သူ။ ကိုဖြိုးဆိုတဲ့ မမသွင် သူငယ်ချင်းနဲ့ ယှဉ်တိုင်း ကျနော်က ဒုတိယ လူပါ။ ကျနော့် အပြုမူ တွေရဲ့ နာကျင်ခံစားမှု့ကို မမသွင် ရိပ်မိသွားတာလား မသိဘူး။ ဒုတိယ အကြိမ် ကျနော့် ပါးပြင်လေးပေါ် မမသွင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး ကျရောက်လာတယ်။
” မောင်ရယ် စိတ်မဆိုးပါနဲ့ … သွင် ဆင်ခြင်ပါ့မယ် နော် မောင် … အဟင့် ဟင့် “
ငိုသံပါလေးနဲ့ ပြောနေတဲ့ မမသွင်ကို ကျနော့်ကို တကယ်ချစ်ရဲ့လားလို့ မေးချင်မိတယ်။ နောက်ဆုံး အသဲနှင့်အောင် ချစ်တဲ့ ကျနော့် စိတ်ကိုပဲ အပြစ်ပုံချ မိလိုက်တယ်ဗျာ။
သူငယ်ချင်းလောက်တောင် အရေး မပါပဲ မမသွင်ရဲ့ ချစ်သူဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အနမ်းတစ်ချက်နဲ့ အပြောလေးတွေကြား ပုံမှန်အတိုင်း စိတ်က ပြန်ဖြစ်သွားဦးမှာပါ။ မမသွင် မျက်နှာကို မော့ကြည့်ပြီး ကျနော် အားတင်းပြုံးပြလိုက်တယ်။
ဘုရား မဝင်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ မမသွင်နဲ့ လူချင်းလမ်းခွဲပြီး ရောက်ချင်ရာ ရောက်ဆိုပြီး ကားလေးနဲ့ မောင်းထွက်လာတာ။ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်းတောင် မသိဘူး။ ကျောက်လမ်း အရှေ့ဘက် လယ်ကွင်းတွေ မြင်မှ မြို့ပြင်လမ်းမကြီးပေါ် ရောက်မှန်း သတိထားမိလာတယ်။ ပုံမှန်လေး မောင်းလာရင်း လမ်းအနောက်ဘက်ခြမ်း မြက်ခင်းစိမ်းလေးတွေနဲ့ သီးသန့်ခန်းလေးတွေ ဖွဲ့ထားတဲ့ ဘီယာဆိုင် တစ်ဆိုင် မြင်လိုက်ရတာ။ အလိုလို လက်က ကွေ့မိလျက် သားပေါ့။
ဆိုင်ရှေ့ နေရာအလွတ်ထဲ ကားလေးထိုးပြီး သီးသန့်အခန်းလေးထဲ ဝင်လာလိုက်တယ်။ လမ်းမပေါ်ကို ကြည့်လို့ရတဲ့ နေရာလေးပေါ့။ အဲချိန် ကျနော့် မြင်ကွင်းထဲ ကားအဖြူလေး တစ်စီး မောင်းဝင်လာတယ်။ ကားက မမသွင် သူငယ်ချင်း ကိုဖြိုးကားလေးပါ။
ကားတံခါးကို လော့ချပြီး လူနှစ်ယောက် ဆင်းလာတာ ကျနော့် စိတ်ထဲ ဒိတ်ကနဲ့ပဲ။ မမသွင်ကို ဘုရားမဝင်တော့ပဲ အအေးဆိုင်မှာတင် ထားခဲ့ပြီး လူချင်းလမ်းခွဲခဲ့တာ မှားသွားလား ဆိုတဲ့ အတွေး ဝင်လာမိတယ်။ ဆိုင်အဝတံခါးကနေ စေ့ထားတဲ့ တံခါးလက်ကိုင်ကို တွန်းပြီး ဝင်လာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို ကြည့်မှ ကျနော့် အမြင်တွေ တက်တက် စင်အောင် လွဲနေမှန်း သိရတယ်။
ကိုဖြိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘေးက မိန်းမကလည်း မမသွင်လို ကိုယ်လုံး တောင့်ပေမယ့် အရပ်က ပုနေတာ။ အဲဒီလူက ဆိုင်ထဲ မျက်စိ ဝှေ့ကြည့်ရင်း ဖုန်းတစ်ချက်ခေါ်လိုက်တယ်။ အပြင်ဘက် ထိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးထားသည့် ခုံတွေဆီ လျှောက်မသွားပဲ ကျနော် ထိုင်နေတဲ့ သီးသန့်အခန်းလေးတွေဘက် လျှောက်လာနေတာ။
” ဟျောင့် … ငမင်း … ဒီမှာဟ “
ကျနော့် ဘယ်ဘက်ခြမ်း သီးသန့်ခန်းလေးထဲက အသံထွက်လာတော့ ရင်းနှီးတဲ့ အသံမို့ သေချာ အားစိုက် နားထောင်လိုက်တယ်။
” အေး … ကိုဖြိုး … ရော့ မင်းကားသော့ “
” အဆင်ပြေတယ်မလား … ခိခိ “
” ဒီလိုပေါ့ကွာ … ကိုဖြိုးရာ … မင်းလို အိမ်နီးနားချင်း ချစ်သူလေး … မရှိတော့ … ကားနဲ့ သွားခေါ်ပြီး တွေ့ရတာပေါ့ “
” ဟာ … မဟုတ်ပါဘူး ကွာ “
” အောင်မှာ … မင်း စားပြီးသွားပြီမလား … ဘာဂျာ ကိုင်ပြီးမှတော့ … ပြီးပြီပေါ့ … ကိုဖြိုးရာ “
” အာ … သူများကိစ္စကို ကိုမင်းကလည်း … မပြောရဘူးလေ “
ကိုဖြိုးသူငယ်ချင်း စကားကြောင့် ကျနော် ခေါင်းနဘမ်း ကြီးသွားရတယ်။ ဆက်ပြောမယ့် စကားတွေ တောင် နားထောင်ရမလိုလို ထပြန်ရမလိုလို ဖြစ်နေ ခဲ့တာ။ ကိုဖြိုး သူငယ်ချင်းရဲ့ ကောင်မလေးက ဝင်ဟန့်လိုက်လို့ စကားစ ပြတ်သွားတော့တာ။
ကျနော်လည်း မမသွင် အကြောင်း စဉ်းစားရင် အမြဲပဲ ဖိစီးမှု များနေရပြီ။ နောက်ဆုံး အိမ်ကိုပဲ ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ဆင်ဝင်အောက် ကားအနက်လေး တစ်စီး ရပ်ထားလို့ ကျနော့်ကားကို ဂိုဒေါင်ဘက် သွားရပ်ထားလိုက်တယ်။
” အင်းဟင်း … အ အ … အရမ်း ဆိုးတာပဲ “
အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ ဧည်ခန်းနဲ့ ကပ်လျက် မာမီ အိပ်ခန်းထဲက ညည်းသံ ကြားလိုက်ရတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြန်ပြောနေတဲ့ အသံမျိုး။ အိမ်ရှေ့မှာလည်း ကားအနက် တစ်စီး ရပ်ထားသေး တယ်။ ကျနော့် စိတ်ထဲ သိချင်စိတ်တွေ များလာတာ ပေါ့။ အသံလာတဲ့ဆီ လျှောက်လာတော့ ယောကျ်ားတစ်ယောက် အသံဗျ။ ပီပီသသ ကြားလိုက်ရတာ။
” ဒီအတိုင်းကြီး နေတော့မှာလား … နန်းရယ် “
” ခုလည်း … ကိုကျော့် စိတ်တိုင်းကျ … နေပေးနေတာလေ … အ … ရှီးးးးးး “
မာမီ အိပ်ခန်း တံခါးက စိထားတယ် ဆိုရုံလေး။ လက် ၂ လုံးစာလောက် ဟနေတာနဲ့ အသာရပ်ကြည့်လိုက်တယ်။ မြင်ကွင်းက အပြင်မှာ စိတ်ရှုပ်လာတဲ့ ကျနော့်ကို ပိုပြီး မွန်းကြပ်စေတယ်။ မာမီတို့ လင်မယား အိပ်တဲ့ ကုတင်ပေါ် မာမီ နို့သီးခေါင်းတွေကို ဦးကျော်မောင်က မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်လျက် အနေထားနဲ့ တစ်ဖက်ပြီး တစ်ဖက်စို့ပြီး လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားထဲ နှိုက်နေတာဗျာ။ မာမီကလည်း ဦးကျော်မောင် ပုဆိုး အပေါ်ကနေ ပေါင်ဂွထဲ ပွတ်သပ်ပေးနေတယ်။
မာမီက အသားဖွေးတယ် ။ အသက် ၄၅ ကျော်လာပေမယ့် မျက်ခုံးထူထူ နှာတံစင်းပြီး ပါးပြင် ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ စကားပြောရင် အမြဲပြုံးရင်း ပြောတတ်တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ပေါ့။ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး လေးနဲ့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ပြည့်တင်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ။ ထမီစကပ် အပျော့သားတွေ ဒေါက်မထည့်ပဲ ၀တ်ရင်တောင် ကော့ထွက်နေတဲ့ မာမီ့ ဖင်သားတွေ မြင်သူ ငေးယူရတယ်။ ဒယ်ဒီ ရှိနေစဉ်က ယတောင် မသိမသာ ပိုးပန်းကျတဲ့ စီးပွားရေး ထိပ်တန်း ပညာရှင်တွေ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးတွေ အများကြီး။ အဲအချိန် မာမီ ကလည်း ဒယ်ဒီမှ ဒယ်ဒီပေါ့။ အခုလိုချိန် ဒယ်ဒီများ သေရာက ထလာပြီး မြင်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ မသိဘူး။
” အတူ နေချင်ပြီ … နန်းရယ် … သားလေး ကိုဟိန်းကိုလည်း … ကိုကျော့် သားအရင်းလို သဘော ထားပါ့မယ် “
” အမ် … ဒီ အရွယ်ကြီး ကျမှ ကိုကျော်ရယ် … နန်း အိမ်ထောင် မပြုချင်တော့ပါဘူး … ကိုကျော့် သံယောစဉ်ကို သိလို့ … အစွမ်းကုန် လိုက်လျောပေးတာလေ “
စကားပြောရင်း မာမီက အပေါ်အင်္ကျီလေး ချွတ်တော့ နို့အုံ ကားကားမို့မို့လေးကို ထိန်းထားတဲ့ ဇာဘော်လီ အနက်လေး ပေါ်လာတယ်။ ဦးကျော်မောင်က မာမီ ဘော်လီချိတ် ဖြုတ်တာတောင် မစောင့်ဘူး ဘော်လီကို အောက်ဆွဲချပြီး ရုန်းထွက်လာတဲ့ နို့သီးခေါင်း လေးတွေကို တဖက်ပြီး တဖက် ကုန်းစို့နေတာ။
ဘော်လီ ချွတ်ပြီးတော့ စကပ်ထမိန် ချိတ်လေး ထပ်ဖြုတ်ပြီး ဖင်ကြီးကြွရင်း လိပ်ချွတ်ပစ်တယ်။ ပေါင်တဖက် ကွေးရင်း တံခါးဘက် လှည့်ထားတော့ အနည်းငယ် ထွက်နေတဲ့ ဗိုက်ခေါက်လေးနဲ့ ဆီးခုံး အောက်ဖက် တင်းမောက်နေတဲ့ အဖုတ်ရာကြီးက အတိုင်းသားပဲ။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ သားရည်ကြိုး အပျော့လေးထဲ ဦးကျော်မောင် လက်တဖက် ဝင်သွားချိန်ကျ မာမီ မျက်နှာလေး မော့တက်လာပြီး တအီးအီး ညည်းနေတော့တယ်။
” အ … ကိုကျော် …… ရှီးးးးး “
တိုးတိုးလေး ညည်းလိုက်တဲ့ မာမီ့ အသံက အိပ်ခန်းထဲ အတိုင်းသား ကြားနေရတယ်။ တလောကလုံး နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတဲ့ ပုံစံနဲ့။ အခန်းလေးထဲ ဦးကျော်မောင်ရဲ့ အပြုအစု အယုယအောက် မာမီက သာယာစွာ ခံယူနေတာ။ မာမီ့ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေး နှစ်ဖက်ကြား စောက်ပတ်အုံလေးထဲ ဦးကျော်မောင် လက်တဖက်က အုပ်ကိုင် ပွတ်သပ်ပေးရင်း ကျန်တဖက်က နို့အုံတဖက်ကို ညှစ်ပေးနေတယ်။ အိပ်ခန်းလေးထဲ ရမ္မက်သွေးကြွယ်နေတဲ့ မာမီ့ မျက်နှာလေးက အသက်အရွယ်ထက် အများကြီး နုပျိုနေသလိုပါပဲ။ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ရင်း မာမီ့ လက်တဖက်က ဦးကျော်မောင် ရင်ဘတ်ကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း ခါးဆီက ပုဆိုး ခါးပုံစကို ဖြည်ချလိုက်တယ်။
အတွင်းခံဘောင်းဘီ အနက်ရောင်ထဲ အမြှောင်းလိုက် ရုန်းကန်နေတဲ့ လီးပေါ် မာမီ့ လက်ဖဝါး နုနုလေးက အုပ်ကိုင် ပွတ်သပ်ပေးတော့ ဦးကျော်မောင် လည်း တရှီးရှီး စုပ်သပ်နေရတယ်။ ကျနော် ကြည့်နေတုန်း ဦးကျော်မောင်ရဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို မာမီက အရင်ချွတ်ပေးပြီး ကြီးမား တုတ်ခိုင်တဲ့ လီးကြီးကို မက်မက်မောမော စုပ်ပေးနေတာ။
ကျနော် မကြည့်ရက်တော့လို့ အကြည့်လွဲတုန်း ဦးကျော်မောင်က လီးစုပ်နေတဲ့ မာမီခေါင်းလေးကို ဆွဲမပြီး ကုတင်ပေါ် ပက်လက်အနေထား လှဲချပစ်တယ်။ မာမီ ပေါင်ကြားထဲ ဦးကျော်မောင်က ဒူးထောက် နေရာယူပြီး ပေါင်တန်နှစ်ဖက် ဆွဲမြှောက် ရင်း ခါးညွတ် မျက်နှာ အပ်လိုက်တာပဲ။
မာမီက ပက်လက် အနေထားနဲ့ နို့အုံတွေ ညှစ်ရင်း တအီးအီး ညည်းနေရှာတာ။ ဦးကျော်မောင် ခေါင်းက မာမီ့ ပေါင်ကြားထဲ တလှုပ်လှုပ်နဲ့။ အတော်လေး ကြာတော့ မာမီ့ ခါးလေး ကော့တက်လာပြီး အားကနဲ့ မြည်သံရှည်ကြီး ဆွဲရင်း အိပ်ယာပြင်ကို တဘုံးဘုံး ထုရိုက်နေတယ်။
” အ … အမလေး ထွက် ထွက် … ထွက်ကုန်ပြီ … အားးးး အ … အဟင့် ဟင့် “
ဦးကျော်မောင်က စကားပြန်မပြောပဲ မာမီ့ပေါင်ကြားထဲ မျက်နှာ အပ်ထားတုန်းပဲ။ လည်စလုပ်က ဖောင်းလိုက် လျော့လိုက်နဲ့ စောက်ရည်တွေ မြိုချပစ်တဲ့ ပုံပါ။
” ကန်တော့နော် … ကိုကျော် “
မာမီ ထထိုင်ရင်း မျက်နှာလေး ရဲတက်လာပြီး အားနာသလိုနှင့် ဦးကျော်မောင်ကို တောင်းပန်နေတယ်။
” ရပါတယ် … နန်းရယ် … ကိုကျော်က ဒီလို အမြဲတမ်း ဖြည့်ဆည်း ပေးချင်တာပါ “
” အိုရ် … ကိုကျော်ရယ် “
ပြောပြီးတာနဲ့ မာမီက ဦးကျော်မောင် မျက်နှာကို ဆွဲကပ်ပြီး နူတ်ခမ်းနားတဝိုက် လျှာနဲ့ ပတ်ယက်ပေး နေတာပေါ့။ စောက်ရည်တွေ ဦးကျော်မောင် ပါးစပ် မှာ ပေကပ်ကုန်တာနေမယ်။ ယက်ပေးပြီးတာနဲ့ မာမီက ကုတင်ပေါ်မှာပဲ ဖင်ဗူးတောင်းလေး ထောင်ပေး နေတော့တယ်။
မာမီ အရှက်ကုန်နေပုံ ကြည့်ရတာ ဒီတစ်ကြိမ်ထဲတော့ မကလောက်ဘူး ဘယ်အချိန် ကတည်းက ဦးကျော်မောင်နဲ့ ခိုးလိုးနေတာလဲ မသိဘူး။ ဒီနေ့လည်း ကျနော့် မွေးနေ့မို့ မမသွင်နဲ့ အပြင် တနေကုန် လည်တယ်ထင်ပြီး ဦးကျော်မောင်နဲ့ ချိန်းလိုးကြတာ နေမှာ။
” နန်းရယ် ……လှလိုက်တာ ဖင်ကြီးက … စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း … ကလေးသာ ထွက်ထားတာ … ဖောင်းအိနေတုန်း … ဒီနေ့ …… ကိုကျော် တောင်းထားတာ … ပေးမှာမလား “
” အင်း … တအား နာရင် … ပြန်ထုတ်ပေးနော် … သွားလေသူတောင် … မပေးဖူးဘူး “
” ခါးကို … နည်းနည်းနှိမ့်ပြီး … ဖင်ကိုကော့ပေးထား … နန်း “
မာမီ့ ဖင်နောက်ကနေ ဖင်သားစိုင်တွေ ပွတ်ရင်း ဦးကျော်မောင်က ခါးကိုဖိချပြီး ပေါင်ဂွထဲ လက်ထည့်ပြီး ဖင်ကို ရသလောက် ထပ်ကော့ခိုင်းနေတယ်။ သူ့စိတ်ကြိုက် အနေထားလေးရောက်မှ ဖင်ကြားထဲ မျက်နှာအပ်ပြီး ယက်ပေးနေသေးတာ။ လေးဖက် ထောက် ကုန်းကတည်းက မာမီ ဖင်ဝလေးကို လက်တဖက်က နိုက်ကလိနေတာပါ။ ဖင်ပေါက်လေး ထဲ လျှာထိုးထည့်တော့ မာမီ့ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး တွန့်လိမ်နေတာ ဖင်ကြီး နောက်ကော့ထိုးရင်း တအီးအီး ညည်းနေပြန်ရော။
” နန်း … ခဏလေး … အောင့်ခံနော် “
ဖင်ပေါက်လေး လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖြဲပြီး တံတွေးထွေးချရင်း ဗျစ်ကနဲ့ လိုးတော့ မာမီ အသံ စူးစူးဝါးဝါးလေး ကြားလိုက်ရတယ်။
” အား … အမေ့ … အား အားးး … ဖင်ကွဲသွားပြီလား … မသိဘူး … နာလိုက်တာ … ကိုကျော်ရယ် “
မာမီက လေးဖက်ထောက် အနေထားနဲ့ ကိုယ်လုံးကို ရှေ့တိုးပြီး ဖင်ထဲက လီးကို ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဦးကျော်မောင်က မာမီရဲ့ ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖမ်းဆွဲထိန်းထားတာ။
” အဟင့် ဟင့် … မရဘူး နာတယ် … ကိုကျော်ရဲ့ … ဖင်အပေါက်ကို … မလုပ်နဲ့တော့ … အ … ကျွတ်ကျွတ် “
ဦးကျော်မောင် လီးတဝက်က မာမီ့ ဖင်ထဲ ရောက်နေ ပါပြီ။ လည်ပြန်ကြည့်ရင်း ငိုယို တောင်းပန်နေတဲ့ မာမီ မျက်ဝန်းထဲ မျက်ရည်ဝဲ နေရှာတယ်။
” ဗျစ် … အမလေးးး … သေပြီ သေပြီ … အဟင့် ဟင့် ဟင့် “
မာမီက ဖင်ကို ရမ်းခါပြီး လီးကို ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတုန်း ဦးကျော်မောင် အတွက်က ဖင်ထဲ လီးဝင်အောင် နှဲ့ပေးသလို ဖြစ်သွားရတယ်။ ဦးကျော်မောင် က အားမလို အားမရ ဖြစ်လာရင်း ခါးဆွဲပြီး ဘွတ်ကနဲ့ ဆောင့်လိုး ပစ်တာ။
” ဘွတ် … အ … အဟင့် ဟင့် “
မာမီ့ လက် ၂ ဖက်က အိပ်ယာခင်းတွေ ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ကိုင်ရင်း တဟင့်ဟင့် နဲ့ ငိုနေတော့တယ်။
” ဗြိ … ဘွတ် … နန်း ဖင်ကို … ပထမဆုံး လိုးခွင့်ရတာ … ကိုကျော်ပေါ့နော် … ဟုတ်လား နန်း … ဖြေပါဦး … အားဟား … ရှီးးးးးး“
” အီးးးး … အ အ … ဟုတ်တယ် … နန်း ရဲ့ စောက်ပတ်ကို … သွားလေသူကို အရင်လိုးပြီး … ဖင်က ရှင် အရင်ဆုံး လိုးခွင့်ရတာပါ … အမလေးးး အ အားးးး “
” ကျေနပ်တယ် … နန်းရယ် … ချစ်တယ်ကွာ … အင့် … ဗျစ် … ဘွတ်ဘွတ် “
စကားပြောရင်း ဦးကျော်မောင်က မာမီ့ ဖင်ကို တုန်ခါနေအောင် ဆောင့်ဆောင့် လိုးတော့တာပဲ။ မာမီမျက်နှာက အစပိုင်းလောက် နာကျင်ဟန် မပြတော့ပါဘူး။
” အင်း … ဟုတ်တယ် … ရှီးးးး ရှီးးးး … အစိလေး ဖိချေပေး … ကိုကျော် … အ အားးး … ကောင်းတယ် … ဖင်လဲ သိပ်မနာတော့ဘူး “
ဦးကျော်မောင်က ဖင်လိုးရင်း မာမီ့ ပေါင်ရှေ့ကြားထဲ လက်ဝိုက်သွင်းပြီး စောက်စိကို ချေပေးတော့ ကျေနပ် အားရတဲ့ အသံလေးနဲ့ ညည်းနေရှာတယ်။ ဖင်အလိုးခံရင်း တဖြည်းဖြည်း လီးအရသာ တွေ့လာပုံနဲ့ ဦးကျော်မောင် ပစ်လိုးတိုင်း ဖင်ကြီး ကော့ပြီး နောက်ပြန် ဆောင့်ပေးနေတယ်။
” ဘွတ် … အ … အင့် … ဗျစ် “
အချက် ၅၀ လောက် မနားတမ်း ဆွဲလိုးရင်း ဦးကျော်မောင်ဆီက အားကနဲ့ ညည်းသံရှည်ကြီး ထွက်ပေါ်လာပြီး ကိုယ်လုံးကြီး တဇပ်ဇပ် တုန်နေတုန်း မာမီလည်း အိပ်ယာခင်း အစလေးကို ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပြီး စောက်ရည်တွေ တဗြန်းဗြန်း ပန်းထုတ်တော့တယ်။ ဦးကျော်မောင်က ခါးကိုင်ထားတဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို လွတ်တော့ မာမီ့ ကိုယ်လေး ပျော့ခွေပြီး ကုတင်ပေါ် လှဲချပစ်တယ်။
” နန်း … ကိုကျော့်ကို … တကယ် ချစ်တယ်ပေါ့ နော် “
” အိုရ် … အဖုတ်ရော ဖင်ရော … ခံပြီးမှ … ဘာပြောရဦးမှာလည်း … ကိုကျော်ရယ် “
မာမီနဲ့ ဦးကျော်မောင် မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေထားနဲ့ လှဲပြီး ဖက်ရင်း စကားပြောတုန်း ကျနော်လည်း မာမီ့ အိပ်ခန်းရှေ့က အသာပြန်ထွက်ပြီး ကားပြန်ထုတ်ရင်း ခဏရှောင်နေလိုက်တယ်။ နာရီဝက်လောက် နေမှ ပြန်လာတော့ မာမီနဲ့ ဦးကျော်မောင်က ဧည့်ခန်းထဲမှာ စကားထိုင်ပြောနေကြတယ်။
” ဟော … သားလေးတောင် … ပြန်လာပြီ “
” ဟုတ် … မာမီ … ဧည့်သည် ရောက်နေတာလား “
” ဟုတ်တယ် … သားရဲ့ … သူက … သား ဒယ်ဒီရဲ့ … လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် … ဦးကျော်မောင်တဲ့ … မြန်မာပြည်ကို … ပြန်ရောက်တာ မကြာသေးဘူး “
” အော် … ဟုတ်ကဲ့ ဦး … ကျနော့် နာမည် … ဟိန်းမင်းလတ်ပါ “
ကျနော်လည်း မာမီတို့ အဖြစ်ပျက်ကို မသိချင် ယောင်ဆောင်ပြီး မိတ်ဆက်လိုက်တာပါ။ ဦးကျော်မောင်က စင်္ကာပူကနေ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေ မြန်မာပြည်ကို သွင်းပြီး တပြည်လုံး ပြန်ဖြန့်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ပါ။ ရပ်ထားတဲ့ ကားအနက်က ကျနော့် အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်တဲ့။
မာမီ့ကို လိုချင်တော့ သားဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ကို ဖားတာနေမယ်။ ဘာနေနေဗျာ မာမီလည်း သွေးသားကောင်းတုန်းဆိုတော့ ကာမ စည်းစိမ်လေး လိုချင်ရှာမှာ။ သူတို့ လက်ထပ်လည်း ကျနော် ကန့်ကွက်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မာမီ မရှိရင် ကျနော် သိပ်ကို အထီးကျန်မှာ သိနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မာမီနဲ့ ဦးကျော်မောင်တို့ လက်မထပ် ဖြစ်သေးပါဘူး။ ကျနော့် တောင်းဆိုမှု့ကြောင့် မမသွင်နဲ့ ကျနော် လက်ထပ် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးက မျှော်လင့် ထားသလို မသာယာခဲ့ဘူးဗျာ။
” တောက် … ကွာ “
” ဒုန်း အုံး … ခလွမ် … ချလွမ် … ခလွမ် လွမ် “
ပြန်စဉ်းစားတိုင်း ပြန်တွေးတိုင်း ဒေါသတွေ ငယ်ထိပ် ရောက်လာတယ်ဗျာ။ မမသွင်နဲ့ စကားများတယ်။ ယူခါစကတော့ ကျနော် သိပ်ကို ဂုဏ်ယူခဲ့တာဗျ။ သိပ်ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းမလေဗျာ။ ချစ်လွန်းလို့ အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ကျနော် သဘောထား ကြီးခဲ့တာတွေကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ဆိုးချင်တိုင်း ဆိုးလာတယ်။
ကျနော်က ဒယ်ဒီ ထားခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာတွေရော ကိုယ်ပိုင် ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ တခြားလုပ်ငန်းတွေလဲ အများကြီး။ မမသွင် သဘောအတိုင်း ရှေ့နေ အလုပ် ဆက်လုပ်ချင်တယ် ဆိုလို့ လွတ်ထားပေးတာ။ သူ့လုပ်ငန်း တိုးတက်လာတော့ ကျနော့်ကို မထီမဲ့မြင်လုပ်ပြီး လင်ယောက်ျား တစ်ယောက်လိုတောင် မသတ်မှတ်တော့ဘူးး။
အလုပ်နားရက်တောင် အိမ်မကပ်ဘူးဗျ။ သွားချင် သလိုသွား စားချင်သလိုစား ဝယ်ချင်တာဝယ် ကျနော် ဘာမှ မပြောခဲ့ဘူး။ မာမီ စိတ်ဆင်းရဲမှာ စိုးလို့ပါ။ မာမီက ကျနော့်ကိုငှဲ့ပြီး ဦးကျော်မောင် လက်ထပ်ဖို့ ပူဆာတာတောင် အချိန်ဆွဲနေခဲ့တာလေဗျာ။ သူစိမ်းယောက်ျားတွေနဲ့ အလုပ်ကို ဘမ်းပြပြီး ညအိပ်ခရီးတွေ ထွက်တာတော့ လွန်လာပြီဗျာ။ မရှက်တမ်း ပြောရရင် လင်မယား သဘာဝ လိုးတာတောင် ငြင်းဆန်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ကြာတော့ ကျုပ်လည်း သူစိမ်းယောက်ျား တစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေလားဆိုပြီး သံသယ ဝင်လာတာပေါ့။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ နေတိုင်းလိုလို စကားများရတယ်ဗျာ။
ဟော ပြန်လာပါပြီ သူတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး။ ဘေးက လူတစ်ယောက် ပါလာသေးတာ။ မြင်ဖူးပါတယ်ဆိုပြီး သေချာကြည့်နေမိတာ။ အဲဒီလူ မျက်နှာ အနီးကပ် မြင်တော့ ကျနော် ဒေါသ တအားထွက်လာ တယ်ဗျာ။ သူ့နာမည်က ဇော်သိုက် အသားဖြူဖြူ ရုပ်ဖြောင့်ပြီး ရေလျှံတဲ့ လင်ရှိမယားတွေကို ကြာကူလီ ရိုက်နေတဲ့ကောင်။
လူကြည့်ရင် အေးဆေးနေတတ်တဲ့ စတိုင်နဲ့ ကျနော့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမတောင် ဒီကောင် ကြာကူလီ ရိုက်လို့ လင်မယား ကွဲသွားကြတာ။ စိုးရိမ်စိတ်တွေ သဝန်တိုစိတ်တွေနဲ့ အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲပစ်တာပေါ့။ ဇော်သိုက် ကတော့ ကျနော့် အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး လစ်ထွက်သွားပြီ။
” ကိုဟိန်း … တအား မိုက်ရိုင်းတာပဲ … ကိုဇော်သိုက် အပေါ်ကို … အဟင့် ဟင့် “
” အော် … ကိုဟိန်းတဲ့လား … ကျနော်က … ခင်ဗျားလင်ပါ … အရင်က တမောင်ထဲ မောင်နေတဲ့ … လင်ကြီးပါဗျာ “
” မောင်လို့ … ခေါ်ရအောင် … တန်လို့လား “
” ဘာ … ခုနထွက်သွားတဲ့ … ကြာကူလီကောင်မျိုးမှ … မောင် ခေါ်ချင်တာလား “
” ဟာ … မင်း မင်း … မင်းကွာ … မူးရင် အိပ်တော့ … သွင် … စကားမများချင်ဘူး “
” စကားများအောင် … မမသွင် လုပ်နေတာလေ … အဲဒီကောင် အကြောင်း ဘယ်လောက်သိလို့လဲ … ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်း ဘမ်းပြပြီး … သူများ မယား ဖျက်စီးနေတဲ့ ကောင်ဗျ “
” အော် အော် … တော်တော် တရားကျစရာ ကောင်းပါလား … ကိုဟိန်း … မင်းဘေးက မိန်းမတွေလို … သွင်ကို အပေါစား ထင်နေတာလား … ဟင်းဟင်း “
” ဟာ … ကေသီနဲ့ ကိစ္စ … မမသွင် ထင်သလို မဟုတ်ဖူး … အကြိမ်ကြိမ် ရှင်းပြပြီးပြီ “
” သွင် … ဘယ်သူစိမ်း ယောကျ်ားနဲ့မှ … မဖောက် ပြန်ဖူးဘူး “
” ဒီမှာ မမသွင် … ကျနော် ရှင်းပြတယ်လေ … ပရောဂျက် … တစ်ခုအတွက် မြေအလွတ်တွေ … လေလံဆွဲတော့ … မဖြစ်မနေ သူနဲ့အတူ ခရီးထွက်ရတာ … နှစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး… တခြား ပါတနာတွေရော … အကုန်ပါတယ် “
” တော်စမ်းပါကွာ … သွင်အခု … မင်းအကြောင်း စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး … မင်းဟာမင်း နေချင်သလို နေ … သွင်လည်း နေချင်သလို နေမှာ … မကျေနပ်ရင် … လမ်းခွဲရုံပဲ “
” ဘာ … တောက် “
” သွင် … ပင်ပန်းလာတာ … နားတော့မယ် “
ကျနော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို စိတ်ကုန်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် မမသွင် အပေါ်ထားတဲ့ ကျနော့် ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေ ရှင်သန်နေတုန်းပါ။ တစ်လလောက်နေတော့ နေပြည်တော်က ဒယ်ဒီ ပါတနာ တစ်ယောက် ဆုံးတာ ဖိတ်စာ ရောက်လာလို့ မာမီလည်း မသွားမဖြစ် သွားဖို့ ပြင်ဆင်ရတာပေါ့။ နောက်ရက်မနက် ကျနော် လိုက်ပို့တော့ အစီအစဉ်က ပြောင်းသွားပြန်ရော။ မြို့ပြင် အမြန်လမ်းပေါ် တောင် မရောက်သေးဘူး မာမီ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ဖုန်းသံလေး မြည်လာတော့တယ်။
” ဟဲလို … နန်းလား “
” အင်း … ကိုကျော် … ပြောလေ “
” အခု … ဘယ်မှာလည်း “
” နေပြည်တော် … နာရေး သွားပို့မလို့ … ကိုကျော်ရဲ့ … အမြန်လမ်းပေါ် … ရောက်တော့မှာ … အဝိုင်းပတ် မီးပွိုင့်နား … ရောက်နေပြီ “
” ကိုကျော်နဲ့လည်း … ရင်းနှီးတယ် … နန်းရဲ့ … အခု ရောက်တဲ့ နေရာက ခဏစောင့် … ကိုကျော် ထွက်ခဲ့မယ် “
ဒါနဲ့ ဦးကျော်မောင်ကို မနက်စာ ကော်ဖီနဲ့ ရှမ်း ခေါက်ဆွဲ စားရင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်က စောင့်နေလိုက်တယ်။ မိနစ် ၂၀ လောက်ကျ ဦးကျော်မောင် ရောက်လာပြီး ကျနော်တို့နဲ့ မုန့်အတူ စားရင်း စကားထိုင်ပြောနေတယ်။ ကျနော်လည်း ကော်ဖီ သောက်ပြီး ဆီးပုံးတင်းလာလို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် နောက်ဖေး ဝိတ်သွားလျှော့တာ ပြန်လာတော့ အစီစဉ်က ပြောင်းသွားရောပဲ။
မာမီက ဦးကျော်မောင်နဲ့အတူ နေပြည်တော် လိုက်သွားဖို့ ပြောနေတာ။ ဦးကျော်မောင်ကတော့ ကျနော့ကို မျက်နှာပူတဲ့ပုံနဲ့ ခေါင်းငုံ့ထားရှာတယ်။ ကျနော် နားလည်ပါတယ်ဗျာ။ မာမီနဲ့ ဦးကျော်မောင်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မမသွင် ကားဘေးမှာ တခြား ကား တစ်စီ ရပ်ထားတယ်။ ကျနော်လည်း ကားကို အဲဒီကားဘေး အသာရပ်ပြီး စက်ပိတ်ပြီး အိမ်ထဲ တန်းဝင်လာတယ်။ အိမ်ထဲ ရောက်တော့ မမသွင်လည်း မတွေ့ဘူး ဧည့်သည်လည်း မတွေ့ဘူး။ သိပ် စဉ်းစားမနေတော့ပါဘူး သူ့ဆီလာတဲ့ အမှု့သည်ပဲ နေမှာပါ။
အိမ်အပေါ်ထပ် တက်လာပြီး ကျနော်တို့ လင်မယား အိပ်ခန်းဘက် တန်းလျှောက်လာတယ်။ အပေါ်ထပ်မှာ အိပ်ခန်းအလွတ် ၂ ခန်းနဲ့ ဘုရားခန်း ၁ ခန်း ကျန်တာကတော့ ဒယ်ဒီ ရှိစဉ်ကာလ ကတည်းက ထားတဲ့ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပန်းပုရုပ်ထု တွေပါ။
” ဟိန်းမင်းလတ် … ခရီးထွက်တာလား … သွင်ရဲ့ “
” အင်း … သူတို့ သားအမိ … နေပြည်တော် … အသိ နာရေးတစ်ခု သွားကြတာ … ညမိုးချုပ်မှ ပြန်ရောက်မယ် ထင်တယ် “
ရုတ်တရက် ကျနော်တို့ အိပ်ခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ အသံကြောင့် ခြေလှမ်းတွေ တုန့်ကနဲ ရပ်သွားမိတယ်။ တံခါး တွန်းဖွင့်မလို လုပ်ပြီးမှ မဖွင့်တော့ပဲ ဟနေတဲ့ တံခါးကြားက ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။
” ဇော် … ဘာဖြစ်တာလဲ … မျက်နှာလည်း … မကောင်းဘူး “
ကုတင်ပေါ်မှာ ဘေးချင်း ကပ်ထိုင်တဲ့ အနေထားနဲ့ မမသွင်က ဇော်သိုက် မျက်နှာကို မော့ကြည့်ရင်း လေသံလေးနဲ့ ပြောနေတာပါ။
” အရင်လက … ကျောက် … အဝယ်မှားတာ … သွင်ရဲ့ … သွင့် ပိုက်ဆံတွေရော … ဇော့် ပိုက်ဆံတွေပါ … သွားရောပဲ … ဟူးးးး “
” အော် … စီးပွားရေး လုပ်တာပဲ … ဇော်ရယ် … အရှုံးအမြတ်တော့ … ရှိမှာပေါ့ … အကောင်းကို မျှော်လင့်ထားသလို … အဆိုးကိုလည်း … ရင်ဆိုင် ရဲရမယ် … ဇော်ရဲ့ “
” ဒါတော့ … ဒါပေါ့ … သွင်ရယ် ……ဒါပေမယ့် … သွင့် ပိုက်ဆံတွေ … အတွက် … ဟို ဟို …… “
” ကဲပါ ဇော်ရယ် … သွင် ကူညီတဲ့ … ပိုက်ဆံက … သွင်ကိုယ်တိုင် ရှာထားတဲ့ … ပိုက်ဆံတွေပါ … စိတ်ထဲမထားနဲ့ “
” အင်းပါ … ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်တယ် … သွင် … ဇော့်အပေါ် … နားလည်ပေးလို့ “
ဇော်သိုက်က ပြောရင်း မမသွင်း ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းနေတယ်။ ဇော်သိုက် မမသွင် ဆီက ပိုက်ဆံတွေ ချူစားနေတာ ကျနော် ရိပ်မိတာ ကြာပါပြီ။ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သတိပေးပေမယ့် ကျနော်တို့ အိမ်ထောင်ရေးက အက်နေတာ ကြာပြီလေ။ ဇော်သိုက် ရင်ခွင်ထဲ ကလေးတစ်ယောက်လို ခေါင်းတိုးနေတဲ့ မမသွင်ကို ကြည့်ရင်း ကျနော့် ရင်တွေ နာကျင်လိုက်တာဗျာ။
ဒီအိပ်ခန်းလေးက ကျနော်နဲ့ မမသွင်ရဲ့ မင်္ဂလာဦး အိပ်ခန်းလေးပါ။ လက်ထပ်ပြီးခါစ မမသွင်နဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လိုးခဲ့ကြတာ။ ကျနော့် အတွက် အမှတ်တရတွေ အများကြီးပါ။
” သွင် “
” ရှင် “
” ချစ်တယ် … သွင်ရယ် “
” သွင်လည်း … ချစ်တာပေါ့ … ဇော်ရယ် “
ဇော်သိုက် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ မမသွင် အင်္ကျီကို ဇော်သိုက်က ဆွဲချွတ်တော့ အလိုက်သင့်လေး အချွတ်ခံနေတယ်။ ချိုင်းအောက်ကနေ လက်လျှိုသွင်းပြီး ဘော်လီချိတ် ဖြုတ်တော့လည်း လက်မောင်း အိုးလေးကို ကားပေးနေတာ။ ကျနော်နဲ့ မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရင် စကားများ ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ မမသွင်က ဇော်သိုက်အရှေ့ကျ အမိန့်နာခံတတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လိုပါပဲဗျာ။
ဘော်လီချိတ် ပြုတ်ပြီး အိခနဲ့ကျလာတဲ့ နို့အုံ ဖွေးဖွေးလေးက အထိန်းအကွတ် မဲ့နေတာပေါ့။ ဇော်သိုက် လက်တွေက မနားပဲ မမသွင်ရဲ့ ပတ်ထမီ ချိတ်ကို ထပ်ဖြုတ်နေတာ။ မမသွင် ဖင်ကြီး တခြမ်းဆီ ကြွပေးတော့ ပတ်ထမီက ကုတင်အောက် ကြမ်းပြင်မှာ ပုံလျက်လေးပဲ။ တဆက်ထဲ မမသွင် လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ဇော်သိုက် ပုဆိုး ခါးပုံစ ဖြည်ပြီး ဆွဲချွတ်ပေးနေတယ်။
ဇော်သိုက် အင်္ကျီကို သူ့ပါသာ ချွတ်ပြီး ကုတင်ချေရင်း ပစ်တော့ ၂ ယောက်စလုံး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဇော်သိုက်က ကုတင်စောင်း ဘေးတိုက် အနေထားနဲ့ပဲ မမသွင် ကိုယ်လုံးလေး ဆွဲဖက်တော့ နို့အုံ အိအိလေးတွေက ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကြား ပြားကပ်သွားတယ်။
” လှလိုက်တာ … သွင်ရယ် “
နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နေရာကခွာပြီး ဇော်သိုက်က မမသွင် နို့အုံနဲ့ ပေါင်ဂွလေး ကြည့်ပြီး ပြောတော့ မမသွင် မျက်နှာ လေးက ပန်းရောင်သန်းနေပြန်တယ်။စကားပြောရင်း ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်ပေါ် လှဲချတော့ ပက်လက်အနေထားဖြစ်သွားတဲ့ မမသွင် ကိုယ်ပေါ် ဇော်သိုက်က ခွလိုက်ပြီ။
” ပြွတ် ပြွတ် … အင်းဟင်း … ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “
နှုတ်ခမ်းချင်း ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်ယူသံတွေ တိတ်ဆိတ် နေတဲ့ အိပ်ခန်းထဲ အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လာ တယ်။ မမသွင် ပေါင်ဂွလေးထဲ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ အောက် ဖောင်းကြွနေတဲ့ စောက်ပတ်အုံလေးပေါ် ဇော်သိုက် အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲက အမြှောင်းလိုက် ထနေတဲ့ လီးက ခါးအားလေးနဲ့ ကြိတ်ပွတ်ပေးနေတယ်။
မကြာပါဘူး ဘောင်ဘီဂွကြားလေးထဲ စိုစွတ်လာပြီး ဘောင်းဘီ ဘေးအနားသားကြားက အရည်ကြည်လေးတွေ စီးကျလာတယ်။ မမသွင် လက်တဖက်က ဇော်သိုက် ဂုတ်ကို ဖိဆွဲထားရင်း ကျန်လက်တဖက်က ဆံပင်တွေကို လက်ချောင်း ဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ ထိုးဖွပေးနေတယ်။
ဇော်ထိုက် နှုတ်ခမ်းတွေက တေ့စုပ်နေရာက အောက်ရွေ့သွားရင်း ဗိုက်သား အိအိလေးပေါ် လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးစွ ပေးနေပြန်ရော။ တဖြည်းဖြည်း အောက်ဆင်းသွားရင်း ဆီးခုံးနား အရောက် မမသွင် ခေါင်းလေး ထောင်လာပြီး ပေါင်ဂွနား ရောက်နေတဲ့ ဇော်သိုက် မျက်နှာကို ရီဝေဝေလေးနဲ့ စိုက်ကြည့်နေတယ်။
ခပ်မို့မို့လေး ဖောင်းနေတဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီပေါ် ဇော်သိုက် မျက်နှာ အပ်လိုက်တော့ မမသွင် ကိုယ်လုံးလေး တဆတ်ဆတ် တုန်နေရှာတယ်။ ဇော်သိုက် လက်နှစ်ဖက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးလေး ခါးကနေ လိပ်ဆွဲချတော့ မမသွင်က ဖင်ကြီး မသိမသာ ကြွပေးလိုက်တာ။
” အား … အ အ … ဇော်ရယ် “
မမသွင်က ကျနော်တို့ လင်မယား အကြိမ်ကြိမ် လိုးခဲ့တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ကျနော် မဟုတ်တဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပြုသမျှ နုနေပါပြီဗျာ။ အကာအကွယ် မဲ့သွားတဲ့ စောက်ပတ်လေးထဲ ဇော်သိုက် လျှာဖျား လေး ထိကပ်သွားပြီး ခဏကြာတော့ ရမ္မက်စိတ်တွေ တောက်လောင်လာပြီး သူကိုယ်တိုင် တောင်းဆိုနေတာဗျ။ ကျနော်နဲ့ဆို ကျနော်ကပဲ ဦးဆောင် တောင်းဆိုတာ များပါတယ်။
” အားဟား … ဇော်ရယ် … အ … အို့ အိုးးး … သွင့်ကို … လိုးပါတော့ … သွင် … မခံနိုင်တော့ဘူး … အားးးး “
ကျနော် တောင်းဆိုးတိုင်း မျက်နှာလေးလွဲပြီး စိတ်မပါတဲ့ ပုံစံနဲ့ မမသွင်။ အခုတော့ သူစိမ်းယောင်္ကျား တယောက်ကို လိုးဖို့ တောင်းပန်နေတာ။ ကျနော့်ရင်ထဲ စူးကနဲ့ နာကျင်မိတယ်ဗျာ။ ဝင်ပြီး ဝုန်းဒိုင်း ကျဲလိုက်ရမလား ရှောက်ထွက်သွားရမလား ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေတုန်း ထပ်မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကျနော် ခေါင်းတွေ ချာချာလည်ပြီး ဒူးတွေ တုန်လာ ရတယ်။
ကျနော် စို့နေကျ မမသွင် နို့သီးခေါင်း နီတာရဲလေးကို လီးထိပ်နဲ့ ဖိပွတ်နေတယ်။ ရင်ဘတ်ပေါ် ခွထားတဲ့ ဇော်သိုက်ရဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို မမသွင် ကိုယ်တိုင် ချွတ်ပေးလိုက်တာဗျ။ နို့အုံကို ဘယ်လက်နဲ့ ညှစ်ပြီး ဒူးထာက် ခွထားတဲ့ ဇော်သိုက် ပေါင်ကြားက လီးကို ညာလက်နဲ့ ဆွဲနိမ့်ရင်း လီးထိပ်နဲ့ နို့သီးခေါင်းကို ပွတ်ပေးနေတာ။
” သွင် … ပါးစပ်လေး ဟထားနော် “
” အင်း “
စကားဆုံးတာနဲ့ ဟပေးတဲ့ မမသွင် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးထဲ ဇော်သိုက်က ဒစ်ဖူးမြုတ်ပြီး လီးအရင်းထိ ဖိသွင်းပစ်တယ်။ မမသွင် ခါးလေးကော့ပြီး ခေါင်းလေး မော့တက်သွားရင်း ဇော်သိုက် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ပုတ်ပြီး တားနေရှာတယ်။
ဒါပေမယ့် ဇော်သိုက်က မရပါဘူး မမသွင် မေးစိလေး လဥနှစ်လုံး ကပ်တဲ့အထိ လီးတဆုံး ဖိလိုးပစ်တယ်။ ကျနော် အမြတ်တနိုး နမ်းခဲ့တဲ့ နူတ်ခမ်းလေးထဲ သူစိမ်းယောင်္ကျား တစ်ယောက်ရဲ့ လီးကြီး ဝင်ထွက်နေတယ်ဗျာ။ အလိုလို ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေ လက်ခုံနဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
” ဝု … အု ဖလူးးး … ဝူးးး အု … အဟွတ် ဟွတ် “
ပါးစပ်လေးထဲ မညှာမတာ လိုးလို့ မခံမရပ်နိုင်ပဲ အော်နေတဲ့ မမသွင် အသံလေးကြောင့် မျက်ရည်က ထပ်ကျလာပြန်ရော။ အဲဒီ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ ကျနော် အကြိမ်ကြိမ် လိုးခဲ့တဲ့ မမသွင် အဖုတ်လေး အခုတော့ သူစိမ်းယောင်္ကျား လီးကြီးက ဝင်ထွက်နေတာကို မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး အရသာခံယူနေတာ။
” ဇော် “
” သွင့် ယောင်္ကျား လိုးတာနဲ့ … ဇော် လိုးပေးတာ ဘယ်သူ ပိုကောင်းလည်း “
” သွင် … သူ့ကို မပေးတာ … ကြာပြီ … သူလည်း အပြင်မှာ စားနေမှာပါ “
မမသွင် စကားကြောင့် ကျနော် ခံပြင်းလိုက်တာဗျာ ကျနော် အပြင်မှာ မရှုပ်ပါဘူး။
” တကယ် “
” တကယ်ပေါ့ … ဇော်ရယ် … လိုးစမ်းပါ နာနာလေး … စကားမပြောနဲ့ “
” လိုးနေပါတယ် … သွင်ရဲ့ … အားမရဘူးလား “
” အင်း … ဖြစ်နိုင်ရင် … ဇော့် လီးကြီးကို … သွင့် အဖုတ်ထဲ … တချိန်လုံး စိမ်ထားချင်တာ “
မမသွင် ရာဂစိတ်ကြောင့် စိတ်တွေလွတ်နေတယ် ထင်တယ်။ နေရာတစ်ခုမှာ သိက္ခာရှိရှိ နေနေရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးတစ်ယောက်၊ ရှေ့နေမတစ်ယောက် ဆိုတာ မေ့နေပုံပါ။
” အင့် အင့် … ဗျစ် … အားးးး … လိုးပါ ဇော်ရယ် … ဇော့်လီးက … သွင့်အဖုတ်ထဲ … ပွတ်ဆွဲနေတာ … အား … ကောင်းလိုက်တာ “
” သွင် …. အာ …. ရှီးးးးး … ဘွတ် ဖွပ်ဖွပ် “
မမသွင် ဒီလောက် စိတ်အရမ်းကြွနေတာ ကျနော် မကြုံဖူးသေးဘူး။ ဇော်သိုက် ဖိအလိုးကို ဖင်ကြီး ကော့ပေးတော့ ဆီးခုံးချင်း ဆောင့်မိတဲ့ တစ်ဖတ်ဖတ် ရိုက်သံက အခန်းလေးထဲ ဆူညံလာတယ်။ အားထည့် လိုးလိုက်တိုင်း မမသွင် နို့အုံနှစ်ဖက်က ပြိုင်တူ ယိမ်းခါနေတယ်။
” ဘွတ် … အ … အ … ဇော် … ပြီးချင်တယ် “
” အ … ရှီးးးးး ရှီးးးးး … အင်း ဇော် … ပြီးလိုက် … သွင့် စောက်ပတ်လေးထဲ … ပြီး ပြီး … အာ အ ရှီးးးး … သွင်လည်း … ပြီးချင်ပြီ … ဇော်ရဲ့ … အားးး အားးးး “
အားရကျေနပ်တဲ့ ညည်းသံလေးနဲ့ မမသွင် ဖင်ကြီး လေပေါ် ကော့တက်လာပြီး ခြေဖျား ထောက်ထားတဲ့ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေး တုတ်တုတ်လေး တဆက်ဆက် တုန်ခါနေတယ်။
” အားးးးး … ကောင်းလိုက်တာ… ဇော်ရယ် “
နှစ်ယောက်သား အထွဋ်အထိပ် ရောက်သွားပြီး ပွေ့ဖက် နမ်းရှိုက် နေကြတယ်။ ကျနော့် ခြေလှမ်းတွေ မမသွင်တို့ အပြင်ထွက်မလာခင် ကားဆီကို မနည်း ကြိုးစား လျှောက်ခဲ့ရတယ်။ ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ မောင်းထွက်လာခဲ့တာ ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိဘူး။ ရုတ်တရက် အလင်းတန်း တစ်ခု ကျနော့် ကားလေးရှေ့ ပေါ်လာတယ်။ ချက်ချင်း လမ်းဘေး ကွေ့ချလိုက်ပေမယ့် နည်းနည်း နောက်ကျသွားပြီ။
” ကျွီ ကျွီ … ဒုန်း ဝုန်းးး … ဒုန်းးး ဝုန်းးး ဝုန်းးး “
” ဟာ … ကားတိုက်ပြီဟေ့ “
” လာဟေ့ … ကားလေးထဲက လူ လှုပ်နေသေးတယ် … ဝိုင်းထုတ်ရအောင် “
ကျနော့် နားထဲ လူသံတွေ တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားပြီးတော့ မှောင်အတိ ကျသွားခဲ့တယ်။
” ပီ ပေါ် … ပီး ပေါ် … ဝီး … ဝီး … ဝီး ပီး ပေါ် “
အရေးပေါ် ဝိုင်ယာလက် သံတွေနဲ့ ကားလေး ဟိုးအရင်က ကျနော့် ရှေ့က တဝီဝိ မောင်းနေတာ ကြုံဖူးပါတယ်။ အခုချိန် ကျနော်က အရေးပေါ် ကားထဲမှာပါ။ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ် ဘေးနားမှာ မမသွင်က မျက်ရည်တွေကျပြီး စိုက်ကြည့်နေတယ်။
” မောင် … ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးနော် “
” အဲဒါတော့ ဆေးရုံရောက်မှ … ဆရာဝန်တွေကို … မေးကြည့်ပါ အစ်မ “
ကားပေါ် ပရဟိတ အကျိုးဆောင်နေတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်ကို မမသွင်က မေးနေရှာတယ်။ မောင် လို့ခေါ်တော့ ကျနော် အံအောမိနေတာဗျ။ ဆေးရုံ ရောက်တော့ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို လူနှစ်ယောက်က ဘီးပါတဲ့ လူနာတင် ကုတင်ပေါ် ပွေ့ပြီး အရေးပေါ်အခန်း သယ်သွားနေတယ်။
” ရှောမှာပါ … ကွာ … ခေါင်းက စုတ်ပြတ်သတ်နေတာ “
” အေးကွာ … ကားစီးနိုင်တယ်ဆိုပြီး … မဆင်မချင် … မောင်းတော့ ဖြစ်ရောပေါ့ “
လူနာတင် ကုတင်ကို တွန်းနေတဲ့ ဝတ်စုံပြာ ဝန်ထမ်း နှစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး ပြောဆိုနေကြတာ။ စိတ်ထဲ တင်းကနဲ့ ဖြစ်သွားရတယ်။ လူတွေဗျာ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်မလုပ်ပဲ သူများကိစ္စ စပ်စုပြောချင်ကြတာ။
အချိန် ဘယ်လောက် ကြာသွားလဲ မသိဘူး ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်ထားတဲ့ ကုတင်ဘေးနား ရှိုက်ငိုနေတဲ့ အသံတစ်သံ ကြားလိုက်ရတယ်။
” အဟင့် ဟင့် … သားရယ် … အဖြစ် ဆိုးလှချည်လား “
မျက်နှာလေး အုပ်ပြီး ငိုနေတဲ့ မာမီ့ အသံနဲ့ ပုံစံကြောင့် ဘေးနား သူနာပြု အကူတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေ သနားပြီး ကြည့်နေကြတာ။
” ဘာတော်တာလဲ … အန်တီ “
” သားပါ … ဆရာရယ် … ကားတိုက်မှုဖြစ်လို့ … မနေ့က ကျွန်မ နေပြည်တော် ရောက်နေတာပါ … ချွေးမက … ဖုန်းဆက်လို့ ချက်ချင်း ပြန်လာခဲ့တာ … ဒီရောက်တော့ … အခုလို မြင်ရတော့တာပဲ … အဟင့် ဟင့် “
ဆရာဝန် တစ်ယောက်က မာမီ့ကို မေးလို့ ဖြေနေရှာ တာ။ ခဏအကြာ ကျနော့်ကို သီးသန့်အခန်း ပို့ကြတော့ ဘေးနား မမသွင် ပြန်ရောက်လာတယ်။
” မာမီ … မောင့် အခြေအနေ … ဘယ်လိုလဲ … ဆရာဝန်က … ဘာတဲ့လဲ “
” အဟင့် ဟင့် … အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးမယ်တဲ့ … သမီးရယ် “
” ဟာ … မောင်ရယ် “
” မငိုပါနဲ့ … နန်းရယ် … ကိုယ်တို့ … သားလေး အတွက် … အကောင်းဆုံး အခြေအနေ ရောက်အောင် … ဆုတောင်းပေးရအောင် “
ရုတ်တရက် ယောင်္ကျားသံ ကြားလိုက်လို့ အသံလာတဲ့ဆီ ကျနော် ကြည့်လိုက်တော့ ဦးကျော်မောင်ပါ။ မာမီ ပုခုံးလေး ဖက်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးနေတယ်။
” နန်း … ဘယ်လိုနေရမလဲ … ကိုကျော်ရယ် … သားလေးက … နန်းရင်နဲ့ … လွယ်မွေးထားရတာလေ “
မာမီနဲ့ ဦးကျော်မောင် စကားပြောတုန်း ရုတ်တရက် မမသွင် လွယ်ထားတဲ့ အိတ်ထဲက ဖုန်းသံလေး မြည်လာတော့ ဖွင့်ကြည့်ပြီး မမသွင် မျက်နှာလေး ပျက်နေရှာတာ။
” မာမီနဲ့ အန်ကယ် … ခဏလေးနော် … သမီး အပြင် ခဏထွက်ဦးမယ် “
ကျနော့် မျက်နှာ တစ်ချက် ခိုးကြည့်ပြီး အခန်းပြင် လှည့်ထွက်သွားတယ်။ ကျနော့် စိတ်ထဲ မသင်္ကာလို့ ကုတင်ပေါ်က ထထိုင်လိုက်တော့ တကိုယ်လုံး ပေါ့ပါးနေတယ်။ အရင်ကထက် ခန္ဓာကိုယ်က ပေါ့ပါးနေတာပဲဗျာ။ မမသွင် ဆေးရုံ အဝင်ပေါက်နား အရောက် လူတစ်ယောက် တိုးကပ်လာတယ်။ တခြားသူ မဟုတ်ဖူး ဇော်သိုက်ဗျ။
ကျနော့် စိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ဘူး။ ကျနော် ဒီလို ကားတိုက်မှုဖြစ်တာ ဒီကောင့်ကြောင့်လေ။ ဇော်သိုက် အင်္ကျီကော်လံကို ဆွဲပြီး မျက်နှာတည့်တည့် ပစ်ထိုးလိုက်တယ်။
” ဟာ “
အံဩ သွားရတယ်။ ကျနော့် လက်တွေက လေကို ဖမ်းပြီး ထိုးလိုက်ရသလိုပဲဗျာ။ ကျနော် ယူကြုံးမရ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကျနော် သေပြီလား။ ဘာလို့ သူတို့ ပြောဆို လုပ်ကိုင်နေတာတွေကို ကြားနေ မြင်နေ ရတာပါလိမ့်။ စဉ်းစားရင်း ချွေးပြန်လာတယ်ဗျာ။ မြင်သမျှ ဒီတိုင်းပဲ ကြည့်နေရတယ်။
သူတို့ ဆေးရုံဝင်း အပြင်ထွက်တော့ ကျနော် လိုက်မရတော့ပါဘူး။ မမြင်ရတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုက ကျနော့်ကို ဆွဲထားသလိုပဲ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံး ပူလာလို့ ကျနော့် အခန်းလေးထဲ ပြန်လာခဲ့ရတာ။
” သူ တဖြည်းဖြည်း … ရှောမယ်ထင်တယ် “
” ဆရာဝန်တွေကတော့ … စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ … ပြော နေတာ “
” သူသတိပြန်ရလာရင် … သင့်ဗိုက်ထဲက …ကလေးက … သူ့ကလေး မဟုတ်မှန်း သိရင် … ဘယ်လိုနေမလဲ … မသိဘူး “
” အာ … မပြောနဲ့ … ဇော်ရယ် “
” ဘာဖြစ်လဲ … သွင်ရယ် … သူ သတိမရတာ … နှစ်ရက် ရှိပြီ “
” တောက် … ငါ သတိရနေပြီ … ခွေးကောင်ရ … ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ … ဝင်မရသေးတာ “
ကျနော် စကားပြောရင်း အသံတွေ တိမ်ဝင်လာပြီ။ မမသွင်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတာ ကျနော်တောင် မသိရပါဘူး။ လင်မယား မအိပ်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီဗျာ။ မမသွင် ရက်စက်တယ်ဗျာ ကျနော့်အပေါ် သံသယလေး တစ်ခုနဲ့ လုပ်ရက်တယ်။
” ခု … ဇော်က … အပြီး သွားမှာလား “
” အင်း … အိမ်က … ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က … အရောင်းဝယ် တည့်တာ … စရံတဝက် ချသွားတယ် “
ခုလည်း ဇော်သိုက် ဘာဂွင်တွေ ရိုက်နေတာလဲ မသိဘူး။
” အော် … ဒါဆို … သွင်တို့ … နောက်တွေ့ဖို့ … မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ “
” ပြွတ် … ပလပ် … ပြွတ်ပြွတ် “
မတ်တတ်ရပ်လျက် အနေအထားနဲ့ မမသွင် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုပ်ယူနေတာ ဇော်သိုက်ကို ကျနော် တားဆီးချိန် မရလိုက်ပါဘူး။ သူတို့ကို ထိတွေ့လို့ကလည်း မရ။
မာမီကလည်း မနေ့ညက တစ်ညလုံး စောင့်ပေးတော့ ဦးကျော်မောင်က ဒီနေ့ တစ်ရက် အနားယူဖို့ ညနေက လာခေါ်သွားတာ။ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ် တင်ထားတဲ့ ကုတင်ရဲ့ အနောက်ဖက်က ကုတင်အလွတ် တစ်လုံးပေါ်မှာ ထိုင်စကားပြော ရင်း မမသွင်နဲ့ ဇော်သိုက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ခပ်တင်းတင်း ဖက်ပြီး အငမ်းမရ နမ်းနေ ကြတယ်။
နမ်းရင်း ဇော်သိုက်က ကုတင်အောက်ဆင်း ရပ်လိုက်တယ်။ မမသွင်က ခြေတွဲလောင်းချပြီး ပေါင်ကားရင်း ဇော်သိုက် ပုခုံး ၂ ဖက်ကို လှမ်းဆွဲ လိုက်တယ်။ ကုတင်အမြင့်က ခါးလောက် ရှိတော့ ဇော်သိုက်က မမသွင် ပေါင်ကြား မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေထားနဲ့ တိုးကပ်ရင်း လည်တိုင်လေး ဆွဲစုပ်ပေး နေတော့တာပေါ့။
” အာ … ဇော်ရယ် … တအား မစုပ်နဲ့ … မာမီတို့ ပြန်လာရင် … မကောင်းဘူး “
ဇော်သိုက်က မမသွင် စကား နားမထောင်ပါဘူး။ လည်တိုင် ပျော့လေးကို ခပ်တင်းတင်း စုပ်ပြီး အင်္ကျီ ကြယ်သီးတွေ တစ်လုံးချင်း ဖြုတ်ပစ်နေတာ။ အင်္ကျီရင်ပွင့် သွားတော့ မမသွင်ရဲ့ ဘရာစီယာ အပြာရောင်လေး ပေါ်လာတယ်။ ဘယာစီရာကို မမသွင် ကိုယ်တိုင် ချိတ်ဖြုတ်ပေးတော့ အရင် ကျနော် စို့နေကြ နို့သီးခေါင်း နီတာရဲလေးက ဇော်သိုက် ပါးစပ်ထဲမှာ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပါပဲ။
” ရှီးးးးး … ဇော်ရယ် “
အားမရလို့ ထင်တယ် မမသွင်က ရင်ဘတ်လေး ကော့ပြီး ဇော်သိုက်ခေါင်းကို သူ့နို့တွေနဲ့ ဖိကပ်ထား တယ်။ နို့အုံလေး ညှစ်ချေပေးတော့ မမသွင် ခေါင်း လေးပါ မော့တက်နေတာ။
ဗိုက်သား ဖွေးဖွေးလေးကို ဇော်သိုက်က ခါးညွတ်နမ်းတော့ ထမီ အထက်ဆင်လေးကို မမသွင် ကိုယ်တိုင် ဖြည်ချလိုက်တယ်။ ချက် အောက်နားလေး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးနားကို ဇော်သိုက် နူတ်ခမ်းတွေက ရွေ့နေပြီ။ မမသွင်က ကုတင်ပေါ် ကန်လန့်ဖြတ် အနေထားနဲ့ လှန်ချပစ် တာ။ ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးလေးကို ဇော်သိုက်က ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ဆွဲချွတ်တော့ ဖင်ကို အလိုက်သင့် ကြွပေးနေတယ်။
ဘောင်းဘီကျွတ်တာနဲ့ ကုတင်စောင်းပေါ် မမသွင် ပေါင်ကြားက အဖုတ်လေး ဖောင်းကြွပြီး အရည်လဲ့ နေတယ်။ ဇော်သိုက်က ခဏပဲ ကြည့်ပြီး အဖုတ်အငုံလေးကို နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်သလို ဆွဲစုပ်ပစ်တယ်။ မမသွင် ပါးစပ်က တအီးအီးနဲ့ ဇော်သိုက်ခေါင်းကို ပေါင်ကြားထဲ ဆွဲကပ်နေတော့တာပဲ။
” အာ … ဇော်ရယ် … သွင် သွင် … သွင် ပြီးချင်လာပြီ … ရှီးးးးး ကျွတ်ကျွတ် “
ဇော်သိုက် လက်ခလယ်လေး မမသွင်ဟာထဲ သွင်းပြီး အစိလေး ဆွဲစုပ်တော့ တအားအားနဲ့ ပြီးသွားတော့တယ်။ ပန်းထွက်တဲ့ အရည်တွေက ဇော်သိုက်မျက်နှာပေါ် စင်ကုန်တယ်။
မကြာပါဘူး ဇော်သိုက်က ကုတင်ပေါ် တက်ထိုင်ပြီး ပုဆိုးလှန်ပေးတော့ မမသွင်က အောက်ပိုင်း ဗလာနဲ့ ဆင်းရပ်ပြီး လီးထိပ်လေးငုံပြီး လက်တစ်ဖက်က လဥတွေ ညှစ်ပေးနေတယ်။ ကျနော့်ရင်ထဲ နှင့်ကနဲ့ပဲ။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဇနီးချောလေး နှုတ်ခမ်းထဲ သူစိမ်းယောင်္ကျား တစ်ယောက်ရဲ့ လီးက နေရာယူထားတာ ဒီတစ်ခါ အနီးကပ် မြင်နေရတာပါ။
ကြည့်နေတုန်း ပါးစပ်ထဲက လီးကိုထုတ်ပြီး ဘယ်လက်လေးနဲ့ ထောင်ကိုင်ရင်း လဥတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ဆွဲစုပ်ပေးတော့ ဇော်သိုက် လီးက မမသွင် လက်ထဲ တဆက်ဆက် တုန်ခါလာတယ်။ ပြီးတော့မှ လီးထိပ်ကို ပြန်ငုံရင်း ခေါင်းလေး ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်နဲ့ စုပ်ပေးနေတာ။
” ရှီးးးးး … တော်တော့ကွာ … ပါးစပ်ထဲ ပြီးသွားလိမ့်မယ် … သွင် “
ဇော်သိုက်လည်း ကုတင်ပေါ်က ဆင်းပြီး မမသွင်ကို ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ် တင်ထားတဲ့ ကုတင်နား ခေါ်လာ တယ်။ ခေါင်းရင်းဘက် ကုတင်ဘောင်ကို လက် ထောက်ခိုင်းတော့ မမသွင်က ခါးညွတ်ပြီး ဖင်ကြီး နောက်ပစ်ထားတာ။ ဇော်သိုက်က မမသွင် ဖင် နောက် ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ဖင်ဝလေး ယက်ပေး တော့ ခေါင်းလေး မော့တက်လာတယ်။ ခဏနေ ဇော်သိုက်ရဲ့ မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေထားနဲ့ ဆောင့် ချက်တွေအောက် အံကြိတ်ထားရင်း ကျနော့် မျက်နာကို ခိုးကြည့်နေတယ်။
” သွင် … သူမျက်နှာကို ကြည့်နေနော် … အင့် … ဗျစ်ဗျစ် … ဘွတ် ဘွတ် “
” အ … အမေ့ … ကောင်းလိုက်တာ … ဇော်ရယ် … ကောင်းတယ် … ကောင်းတယ် … အ အားးးးး “
ဇော်သိုက်က ဘာသဘောနဲ့ မမသွင်ကို လိုးရင်း ကျနော့် မျက်နှာကို ကြည့်ခိုင်းလဲတော့ နားမလည်ပါဘူး။ အတော်လေး ကြာတော့မှ နှစ်ယောက်သား ပြီးသွားပြီး ခြေရင်းဖက်က ကုတင်ပေါ် ဖက်အိပ်ရင်း အမောဖြေနေကြတယ်။
ကျနော် မမသွင်တို့ နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရင်း တစ်ညလုံး ထိုင်ငို နေမိတာပါ။ ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်သွားလည်း မသိဘူး။ ပိတ်အဖြူ အ၀တ်စကြီး လာအုပ်မှ လန့်နိုးလာတယ်။
” ဟာ … ဟေ့လူတွေ … မလုပ်ပါနဲ့ … ကျနော် မသေ … သေးဘူးဗျ “
ဆွဲဖယ်တော့ မရဘူးဗျ။ ကျနော့် လက်က လေကို ဖမ်းမိနေတာ။ မမသွင် ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိဘူး။ ဇော်သိုက်လည်း မတွေ့တော့ဘူး။ နားထဲ ဆူညံလာလို့ မျက်လုံးဖွင့်တော့လည်း ဘာမှကို မမြင်ရတော့ လန့်တောင်လာပြီ။ ဘေးနား ငိုသံ သဲ့သဲ့တော့ ကြားမိနေတယ်။
” ကယ်ကြပါဦးဗျာ … ကျနော် မသေ သေးဘူးဗျ … ကယ်ကြပါဦး … မာမီ … မာမီရေ “
ကျနော် အော်တဲ့အသံ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကောင်း ကောင်း ကြားရတယ်ဗျ။ ဘယ်သူမှ အရေးမစိုက်ကြ တာ။ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားတော့မှ ပြန်မှတ်မိလာတယ်။
မမသွင်နဲ့ ဇော်သိုက်တို့ ဖောက်ပြန်တာတွေ့ပြီး အိမ်ကနေ ကားကို တအား မောင်းထွက်လာတာ လမ်းမှာ အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်တာပါ။ ကျနော် သေဆုံးသွားပြီလား ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါလိမ့်။ မနေ့ညကတောင် မမသွင်နဲ့ ဇော်သိုက် ကျနော့်ရှေ့တင် ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မြင်ကွင်း။ ပြီးတော့ မာမီ ဆေးရုံ ပြန်မလာတော့တာလား။ တွေးနေတုန်း ဗြုံးကနဲ့ အလင်းတန်းကြီး ပေါ်လာလို့ မျက်စိနှစ်ဖက်လုံး ပိတ်ပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ။
” သားရယ် … အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား … မာမီ့ကို … ထားခဲ့ပြီပေါ့ … အဟင့် ဟင့် “
” စိတ်ကို လျှော့ပါ … နန်းရယ် … အကုန်ကြိုးစား ခဲ့ကြတာပဲ … သူ့ကံကိုက … ဒီလောက်ပဲ ပါလာတာပါ “
” သားလေး … ကျမကို … ထားသွားပြီ ရှင့် … အဟင့် ဟင့် … အီးဟီး “
” မာမီ … သား မသေပါဘူး ဗျ … သား မသေ သေ … … … “
မာမီကို ပြောရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်မိမှ ကျနော့် ဘေးနား လူတွေ အုံနေတာဗျ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ အုတ်ဂူ ဖြူဖြူ လေးတွေ။ ကျနော့် ကိုယ်က လှုပ်မရတော့ပါဘူး။ လူသေတွေတင်တဲ့ တွန်လှည်း ကုတင်လေးပေါ် ရောက်နေတာပါ။ မာမီ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် လှုပ်ကို မရတော့တာပါ။
ကျနော့် လက်မ ၂ ချောင်းနဲ့ ခြေ ၂ ချောင်းကို အပ်ချည် ကြိုးတွေနဲ့ ချည်ထားကြတယ်။ မမသွင် ကျနော့်ကို အမှတ်တရ ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ကျီလက်ရှည်လေး လွှမ်းပေးထားတာဗျ။ အင်္ကျီလေး မြင်တော့ မမသွင်ကို သတိရမိတယ်ဗျာ။ ကျနော့် နောက်ဆုံး ခရီးမှာ မြင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ မာမီ ကိုတော့ စိတ်ချပါပြီ။ ဦးကျော်မောင် ရှိနေပြီလေ။ မမသွင်က ဇော်သိုက်နဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ဇော်သိုက်က အကြံသမားဗျ။ ကျနော် မရှိတဲ့ခါ ဘယ်လို နေမလဲ မသိဘူး။
” သားလေးရေ … သားလေး … အီးဟီး … “
” ကျွီ ကျလီ … ကျွီ ကျွီ “
မာမီ ငိုသံနောက်ဆုံး ကြားရပြီး ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ကို မီးသဂြိုလ် စက်ထဲ တွန်းယူသွားကြပြီဗျာ။
” ဂျိမ်း … ဂျိမ်း … ဒလိန်း … ဂျိမ်း “
မီးသဂြိုလ်တဲ့ သံတံခါးကြီး ပိတ်သွားတာနဲ့ အရာအားလုံး မှောင်အတိ ကျသွားပါပြီ။
စ/ဆုံး ဖတ်ရှု့ပေးသော မိတ်ဆွေများအား ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 7,454